Saraakiisha Imaaraatka Carabta oo Puntland saaka ka baxaya - BAARGAAL.NET
deg deg Imaaraatka pmpf
Saraakiisha Imaaraatka Carabta oo Puntland saaka ka baxaya
✔ Admin on April 14, 2018 0 Comment
Tan iyo biloowgii khilaafka DFS iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa isa soo taraya khilaaf sii ballaaranaya oo saameeyey xiriirkii Puntland iyo Imaaraadka Carabta. Khilaafka ayaa warar sugan oo Radio Daljir helayso waxa ay sheegayaan in uu salka ku hayo cadaadis ay dowladda Imaaraadku saartey Puntland, kagana dalbaneyso in Puntland ay la safato Imaaraadka, kana hortimaado dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wararkii ugu danbeeyey oo aan ka helayno ilo-wareedyo sugan ayaa sheegaya in dowladda Imaaraatku ku cadaadisay Puntland in ay warsaxaafadeed ka soo saarto khilaafka jira, garabna ay u noqoto Imaaraadka, kana hortimaado dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Farmaajo. Dowladda Puntland ayaa si toos ah uga biyo-diidday dalabka Imaaraadka.
Wararkii ugu danbeeyey ee ka biyadiidka Puntland ee siyaasadda Imaaraadka Carabta ayaa sababay in dowladda Imaaraadku ay saraakiisheeda ku sugan Puntland, gacantana ku haya ciidamada Imaaraatku tababareen ee Booliska Badda Puntand (Puntland Maritime Police Force PMPF), in ay degdeg dalka uga soo baxaan. Warkan waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey saraakiil ka tirsan ciidamada Booliska Badda Puntland, waxa ayna ku sii dareen in saraakiisha Imaaraadku ay baxayaan isla saaka.
Warar kale oo aan ka helayno xerada weyn ee Ciidamadda Booliska Badda Puntland ayaa ku daraya in saraakiisha Imaaraatku ay isku dayeen in ay la baxaan qalabka xerada yaal, laakiin Puntland aysan oggolaan in wax qalab ah xerada lagala baxo.
Khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka oo indhawaalaba qar ka sii dhacayey, ayaa 9kii bishaan April DFS Soomaaliya waxa ay Imaaraadka Carabta kala wareegtay lacag dhan $9.6 Milyan Doolarka Mareykanka oo dowladda Imaaraadku ay si sharcidarro ah dalka ku soo galisey, kalana soo degtay gegida diyaaraha Aden Cadde. Lacagtaas ayaa DFS ku tilmaantey mid loogu talogaley in lagu khalkhaliyo siyaasadda Soomaaliya, laguna curyaamiyo DFS.
Xigasho: Radio Daljir